04/20/12 ~ The Ahmadi Post : Myanmar
အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံ ၊ တာဆိက်မာလာယာရှိ အဟ်မဒီယာဟ်မွတ်စလင်များ၏ဗလီတိုက်ခိုက်ခံရ
နိုင်ငံအတွင်း၌ နောက်လိုက်အရေအတွက်နည်းသောအုပ်စုများအား တိုက်ခိုက်လျက်ရှိသည်ဆို သည့်အချက်အား သက်သေပြမီးမောင်းထိုးလိုက်ပေပြီ။ အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံ၊ ဂျာဗားကျွန်းအနောက် ဘက်၊ တာဆိက်မာလာယာ၊ ဘာဘာကန်ဆင်ဒန်ကျေးရွာရှိ အဟ်မဒီယာဟ်မွတ်စလင်မ်များ၏ ဗလီ၀တ်ကျောင်းတော်အား ယနေ့နံနက်ပိုင်း သောကြာ၀တ်ပြုမှုမတိုင်မီ ရာနှင့်ချီသောလူများက တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြသည်။
အဟ်မဒီတစ်ဦးဖြစ်သူ အန်ဒါဂျူအန်ဒါ၏အဆိုအရသိရသည်မှာ မနက် ၉ နာရီခန့်တွင် ဗလီပတ် ပတ်လည်၌ ဒါဇင်ပေါင်းများစွာရှိသည့်လူအများစုဝေးနေကြပြီး ၄င်းတို့သည် အဖြူနှင့်အစိမ်း ရောင်များ၀တ်ဆင်ထားကြကာ Islamic Defenders Front (FPI) အလံများကိုလည်း ကိုင်ဆောင်ထားကြသည်။ "ပထမတော့သူတို့တွေ အော်နေကြတာပဲ၊ နောက်မိနစ်နည်းနည်း ကြာတော့ ကျောက်တုံးတွေနဲ့ပစ်ပေါက်ပြီး ဗလီထဲကို ချိုးဖျက်၀င်လာကြတယ်" ဟု အန်ဒါက ယနေ့သောကြာ နေ့တွင် ဂျကာတာပို့စ်သတင်းစာကို ပြောကြားသွားသည်။
ဗလီကိုဖျက်ဆီးကြသည့်သူများက ကော်ဇော်များနှင့် ဘုရား၀တ်တက်သည့်အခါအသုံးပြုသော ဖျာများကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးနေသည့်အချိန်၌ အန်ဒန်နှင့် သူငယ်ချင်းဖြစ်သူ ဒီဒီတို့မှာ ဗလီအတွင်းရှိနေ ခဲ့ကြသည်။ အန်ဒန်က ထပ်မံပြောကြားခဲ့သည်မှာ "ကျွန်တော်ချက်ချင်းပဲ ကိုယ်လွတ်ရုံးထွက်ပြေး ခဲ့ရပါတယ်။ ကျွန်တော့်ယုံကြည်ချက်က လုံး၀မှားယွင်းမှုမရှိဘူးဆိုတာ သေချာပါတယ်။"
ဗလီ၏ကော်ဇောများနှင့် အခြားအခင်းများကိုမီးရှို့ရန် တိုက်ခိုက်သူများက ဂက်စ်များဖြည့်တင်းထား သည့်ပုလင်းများကို အသုံးပြုခဲ့ကြောင်း အဟ်မဒီယာမွတ်စလင်မ်အဖွဲ့ ၊ တာဆိက်မာလာယာ၏ ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ ဘူဒီဘက်ရုစ္စလာမ်က ပြောသည်။ လူအများက မီးလောင်ရာနေရာမှ တိမ်း ရှောင်နိုင်ခဲ့ကြပြီး ထိခိုက်မှုနှင့်အသေအပျောက်မရှိကြောင်း သိရသည်။
တာဆိက်မာလာယာ၏ FPI မှ ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ အဆပ်ဆိုဖီယန်က တိုက်ခိုက်သူများမှာ FPI အဖွဲ့၀င်များမဟုတ်ကြဘဲ အနီးနားပတ်၀န်းကျင်ရှိ အစ္စလာမ်ဘာသာရေးကျောင်းများမှ ကျောင်း သားများနှင့်အခြား အစ္စလာမ့်အဖွဲ့အစည်းမှ လူများသာမက ဒေသခံများပါ၀င်ကြောင်း ပြောကြား သည်။ ထိုသူက တိုက်ခိုက်သူများသည် FPI မှမဟုတ်ကြောင်း ငြင်းဆိုသော်လည်း ဗလီရှိဖျာများကို မီးရှို့ရန် သူတို့မကြိုးစားခဲ့ကြောင်း၊ သို့သော် ပတ်၀န်းကျင်မှလူအများက သူတို့အားဖျာများနှင့် ကော်ဇောများကို မီးရှို့ဖို့ တိုက်တွန်းခဲ့ကြောင်း ဖြည့်စွက်ပြောကြားခဲ့သည်။ "ကျွန်တော်တို့ ချက်ချင်း ပဲ မီးရှို့ခဲ့ကြတယ်။" ဟု အဆပ်က ဆိုသည်။
ဒေသဆိုင်ရာတာ၀န်ခံတွေက ဗလီအားပိတ်ထားသော် လည်း အဟ်မဒီများက ၀တ်ပြုဆုတောင်းခြင်း များဆက်လက်ပြုလုပ်နေ၍ တိုက်ခိုက်သူများကဒေါသ အမျက်ထွက်ရခြင်းဖြစ်ကြောင်း၊ တာ၀န်ခံများ က အနီးနားပတ်၀န်းကျင်မှဝေဖန်တိုင်ကြားချက်များကို လက်ခံရရှိခဲ့ကြောင်း သူကတပါတည်း စွပ်စွဲပြောကြားသွားခဲ့သည်။
လွန်ခဲ့သည့်နှစ်လအတွင်း အနောက်ဂျာဗား၌ အဟ်မဒီမွတ်စလင်မ်များအား တိုက်ခိုက်ခြင်းမှာ ယခုတစ်ကြိမ်အပါအ၀င် နှစ်ကြိမ်ရှိသွားပြီဖြစ်သည်။ ဖေဖော်ဝါရီလ ၁၇ရက်နေ့တွင် အနောက် ဂျာဗားရှိ ဆီယန်ဂျူ၊ ဆီဇားရွာတွင်လည်း အလားတူတိုက်ခိုက်မှုမျိုးဖြစ်ပွားခဲ့သည်။
ဗလီအားဖျက်ဆီးမှုများပြုလုပ်နေစဉ်အတွင်း၌ပင် ယောကျာ်းမိန်းမ ၈၀ ခန့်ရှိသည့် အဟ်မဒီများ က ထိုဖျက်ဆီးခံထားရသည့်ဗလီတွင်ပင် သောကြာ၀တ်ပြုမှုကို ဆက်လက်ပြုလုပ်ခဲ့ကြသည်။ ဘူဒီက သူ့အနေဖြင့် ရဲများကိုတိုင်တန်းခဲ့သော်လည်း သူတို့၏ရှေ့တွင်ပင် ဗလီအားဖျက်ဆီး နေသော်လည်း သူတို့ကိုယ်တိုင်ထိုသို့ပြုလုပ်ဖို့အခွင့်ပေးခဲ့ကြောင်း ပြောသည်။
"ဒီဗလီက သမိုင်း၀င် ပါ။ ၁၉၂၀က တည်ဆောက်ထားတာပါ။ Serang Archeological Preservation Agency က အသိအမှတ်ပြုထားတဲ့ သမိုင်း၀င်အဆောက်အဦလည်းဖြစ်ပါတယ်။" ဟု ဘူဒီကရှင်းပြခဲ့သည်။
တာဆိက်မာလာယာမှ ရဲမှူးဖြစ်သည့် Adj. Comr. Gupuh Setiyono ကမူ ရဲများက ထိုသို့ပြုလုပ် ခွင့်ပေးခဲ့သည်ဆိုခြင်းအား ငြင်းဆိုသွားခဲ့သည်။ သူက ရဲများအနေဖြင့် အဟ်မဒီများကိုမလိုလား သည့်ဒေသခံများအား တိုက်ခိုက်မှုမဖြစ်ပွားမီတစ်ရက်အလိုက ဖျောင်းဖျပြောဆိုဖို့ကြိုးစားခဲ့ ကြောင်း ပြောကြားခဲ့သည်။ သူက အဟ်မဒီမွတ်စလင်မ်များကို လက်ညှိုးညွှန်လျက် ထိုသူများက တိုက်ခိုက်မှုဖြစ်ပွားရန် အစပျိုးသူများဖြစ်ကြောင်း ပြောဆိုခဲ့သည်။
Gupuh က "ကနဦးကတော့ လူအုပ်စုကြီးက အဟ်မဒီတွေကို သူတို့မလိုလားကြောင်း ကြေညာစာတမ်းတွေကပ်ဖို့ လာကြတာပါ" ဟု ပြောခဲ့သည်။ "'ဒါပေမယ့် အဟ်မဒီတွေရဲ့ အပြောအဆိုကြောင့် လူအုပ်စုကြီးက စတင်တိုက်ခိုက်ရတာပါ" ဟု ဖြည့်စွက်ခဲ့သည်။ ရဲများက လုပ်ရိုးလုပ်စဉ်အတိုင်း အခင်းဖြစ်ပွားမှုကို စုံစမ်းမည်ဖြစ်ကြောင်းလည်း တပါတည်းပြောကြား ခဲ့သည်။ သူ့အနေဖြင့် Cult Surveillance Coordinating Agency (Bakorpakem) နှင့် Indonesian Ulema Council (အိုလမာ) တို့ကို ဆင့်ခေါ်၍ အစည်းအဝေးတစ်ခုပြုလုပ်ကာ နောက်ဆက်တွဲပြဿနာများ မဖြစ်ပွားအောင် နည်းလမ်းရှာဖွေသွားမည်ဖြစ်ကြောင်းလည်း ပြောကြား ခဲ့သည်။
အင်ဒိုနီးရှား : ဆင်ဂါပါးနရှိ အဟ်မဒီဗလီဝတ်ပြုကျောင်းဆောင်အား အက်ဖ်ပီအိုင် အစ္စလာမ်မစ်အစွန်းရောက်များ တိုက်ခိုက်
တာဆိခ်မာလာယာ: ဒါဇင်ပေါင်းများစွာရှိသည့်လူအုပ်ကြီးသည် ဆင်ဂါပါးန၊ တာဆိခ်မာလာယာ ဆိုသောဂျာဗားကျွန်းအနောက်ဘက်ရှိအဟ်မဒီမွတ်စလင်မ်ဗလီကျောင်းဆောင်၊ ဘိုင်တွရ် ရာဟ်မားန် နှင့်ဗလီအတွင်းမှအဟ်မဒီမွတ်စလင်မ်အဖွဲ့ဝင်များကို တိုက်ခိုက်ဖျက်ဆီးရန် ကျောက်တုန်းများ၊ ဒုတ်များကိုကိုင်ဆောင်ပြီး ဝန်းရံထားကြသည်။
ဒေသခံသတင်းများအရ အက်ဖ်ပီအိုင်ခေါ် အစ္စလာမ်မစ်အစွန်းရောက်လူအုပ်စုကြီးက ယနေ့ ၂၀၁၂ ၊ ဧပြီလ၊ ၂၀ ရက်နေ့၊ မနက်ပိုင်းက အဟ်မဒီယာမွတ်စလင်မ်ဗလီခြံဝန်းကို ကျော်တက်ဝင်ရောက်ခဲ့ သည်။ ဗလီအတွင်းရှိနေတဲ့သူများကို ကရုမစိုက်ဘဲ ဗလီအဆောက်အအုံ့နှင့် ပစ္စည်းများကိုစတင် ဖျက်ဆီးခဲ့ကြသဖြင့် ပြတင်းပေါက်များမှ အခိုးအငွေ့များကိုပင် မြင်တွေ့နေရသိရသည်။ ၁၅ မိနစ် အတွင်း၌ပင် ဗလီအဆောက်အအုံက အလွန်ဆိုးရွားစွာပျက်ဆီးသွားခဲ့သည်။
ဒေါသူပုန်ထနေကြသည့်လူအုပ်ကြီးက ဗလီထဲတွင်အဟ်မဒီများ၏ ယုံကြည်မှုကိုအခြေခံသော အစီ အစဉ်များ၊ ဆွေးနွေးပွဲများလုပ်ဆောင်နေသေးကြောင်းယုံကြည်နေကြသည်။ အရင်ကလည်း ရန်လို နေကြသည့်သူများက အဟ်မဒီများကိုဝတ်ပြုဆုတောင်းခြင်းနှင့် ကျမ်းမြတ်ကုရ်အာန်ရွတ်ဖတ်ခြင်း များမှတားမြစ်ဖို့ ကြိုးစားခဲ့ကြဖူးသည်။
ဗလီအဆောက်အအုံထဲတွင်ရှိနေသော အဟ်မဒီယာမွတ်စလင်မ်အဖွဲ့ဝင် ဘူဒီဘတ်ဒ်ရုစ် ဆလာမ်၏ အဆိုအရ အကြမ်းဖက်သမားများက ဗလီကိုတိုက်ခိုက်နေစဉ်တွင် အဟ်မဒီများမှာသောကြာ ဂျွမ္မအာဟ်ဝတ်ပြုရန် အသင့်ဖြစ်နေချိန်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။ အီမာမ်နှင့်ဗလီဂေါပကလည်းဖြစ်သူ ဆလာမ်က မိမိတို့အနေဖြင့် ဘေးလွတ်ရာကို တိမ်းရှောင်ခဲ့ရကြောင်းဆိုသည်။
၎င်းအကြမ်းဖက်သမားများက မိမိတို့ဒေါသအလျောက်လွန်ကျူးပြီးသွားသည့်အခါ အခြားနေရာများ တွင်လည်း ထိုသို့ပြုလုပ်ကြရန်တိုက်တွတ်းနှိုးဆော်မှုများရှိနေကြောင်း သိရသည်။
မန်ချက်စတာ၊ မော့စ်ဆိုဒ် : စတာလင်ပေါင် ၁ မီလီယံတန် ဗလီဝတ်ကျောင်းတော်ကြီးမှ ဝတ်ပြုသူပေါင်းတစ်ထောင်အတွက်
နယ်ပယ်အတွင်းက မွတ်စလင်မ်တွေအကျိုးကို ရည်စူးပြီးတည်ဆောင်ခဲ့တဲ့ ဗလီကျောင်းဆောင်ကြီး ကိုတော့ လာမယ့်ရက်သတ္တပတ်များအတွင်းမှာ ဖွင့်လှစ်နိုင်တော့မှာပါ။ ပရောဂျက်ကတော့ ၃ နှစ်နီးပါးကြာမြင့်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။
စတာလင်ပေါင် ၁ မီလီယံကုန်ကျခဲ့တဲ့ ဒါရွလ်အာမာန် ဗလီကျောင်းဆောင်ကြီးကတော့ မန်ချက်စတာ မြို့ရဲ့ ၊ မော့စ်ဆိုဒ်မှာတည်ရှိပြီး ဝတ်ပြုသူပေါင်းတစ်ထောင် ဝင်ဆံ့ပါတယ်။ ဗလီကျောင်းဆောင် ကြီးကိုတော့ အစ္စလာမ်သာသနာကို မူရင်းအစစ်အမှန်အတိုင်းပြန်လည်ပေါ်ထွန်းစေဖို့ရည်သန်ပြီး အခြေတည်ခဲ့တဲ့ အဟ်မဒီယာမွတ်စလင်မ်အဖွဲ့က တည်ဆောက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီး ဥရောပအနောက်ပိုင်း မှာတော့ အဟ်မဒီဗလီဝတ်ကျောင်းတွေအနက် ဒုတိယမြောက်အကြီးဆုံးလည်းဖြစ်ပါတယ်။
မီနာရာနဲ့ ဗလီဝတ်ကျောင်းသဏ္ဌာန်အမိုးတို့ပါဝင်တဲ့ အဲဒီဝတ်ပြုကျောင်းဆောင်ကြီးကိုတော့ ဝတ်ပြု ကိုးကွယ်သူများရဲ့ အလှူဒါနများနဲ့ လွန်ခဲ့တဲ့ ၃ နှစ်ကစတင်တည်ဆောက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
ဂရင်းဟေးစ်လမ်းသွယ်ပေါ်က လက်ရှိအဆောက်အဦကိုတော့ ပြန်လည်မွမ်းမံပြီး ဗလီကြီးရဲ့ဒီဇိုင်း အသစ်ထဲမှာ ထည့်သွင်းပြီး အဆောက်အဦတစ်ခုတည်းအဖြစ်ဆောက်လုပ်ထားပါတယ်။ လူဦးရေ တစ်ထောင်နီးပါးရှိတဲ့ မန်ချက်စတာမြို့က အဟ်မဒီမွတ်စလင်မ်များကတော့ ဗလီကြီးပေါ်အခြေ တည်ပြီး အစ္စလာမ်နဲ့အခြားဘာသာများအကြား ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့် အပြန်အလှန်နားလည်မှုရှိရေးတို့ကို စထက်တပိုးလှုံဆော်ဆောင်ရွက်ဖို့ မျှော်မှန်းထားကြပါတယ်။
အဟ်မဒီမွတ်စလင်မ်များရဲ့ဆောင်ပုဒ်အတိုင်း "အားလုံးအပေါ်မေတ္တာထား၊ မည်သူ့ကိုမှအမုန်းမပွား" ဆိုတဲ့အတိုင်း လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်နေကြတာနဲ့အမျှ ဗလီကြီးကိုလည်း ငြိမ်းချမ်းခြင်း၏ နားခိုရာ အဖြစ် အဓိပ္ပါယ်ဖော်ဆောင်ကြရပါမယ်။ ဗလီကြီးရဲ့ ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ ဒေါက်တာအီမ်ရားန်ခန်းက တော့ အောက်ပါတိုင်းပြောကြားပါတယ်။
" ဒီဗလီကြီးကို​တော့ ပတ်ဝန်းကျင်မှာနေထိုင်တဲ့ အဟ်မဒီများရဲ့လုပ်အားနဲ့ပဲဆောက်လုပ်နေတာပါ။ လွန်ခဲ့တဲ့ ၃ နှစ်ကစတင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီး ဂုဏ်ယူစရာပါပဲ - အခုတော့တရားဝင်ဖွင့်လှစ်နိုင်တော့မှာပါ။ ကျွန်တော်တို့အားလုံးက ဗလီကြီးကိုငြိမ်းချမ်းခြင်းပြယုဂ်ဖြစ်စေလိုပါတယ်။ အဖွဲ့ကြီးရဲ့ရည်ရွယ်ချက် ကတော့ အစ္စလာမ်နဲ့ဘာသာခြားများအကြား ကူညီရိုင်းပင်းရေးကို တိုးတက်ဖော်ထုတ်လုပ်ဆောင် ဖို့နဲ့ မိမိနေထိုင်ရာတိုင်းပြည်အပေါ် သစ္စာရှိဖို့ပါပဲ။ ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေးကိုတိုးတက် ဖော်ဆောင်နိုင်ဖို့ အခြားအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့လည်း ပူပေါင်းလုပ်ဆောင်သွားမှာပါ။ ဗလီကြီးက မန်ချက်စတာအဝန်းအဝိုင်းကြီးတစ်ခုလုံးအတွက်ဖြစ်စေဖို့ ကျွန်တော်တို့မျှော်လင့်ပါတယ်။ "
ဗလီကြီးကို သာသနာရေးရာကိစ္စများ၊ လူငယ်ရေးရာများ၊ လူမှုရေးရာများအတွက်သာမက ဘာသာ ပေါင်းစုံနှီးနှောဖလှယ်ပွဲတွေ ကွန်ဖရင့်တွေကျင်းပဖို့အတွက်လည်းသုံးစွဲသွားမှာပါ။ အာရှအသင်း အဖွဲ့များကို သွေးလှူဒါန်းခြင်းတွေမှာ ပိုပြီးတော့ပါဝင်လာစေဖို့အတွက် လှုံဆော်နိုင်ဖို့ ပုံမှန်သွေး လှူဒါန်းရာနေရာတစ်ခုအနေနဲ့လည်း အသုံးပြုသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
Open publication - Free publishing - More role of clay